आदिवासी जनजातिका अस’न्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय झण्डा ज’लाईयो – डा. केसी «
आदिवासी जनजातिका अस’न्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय झण्डा ज’लाईयो – डा. केसी
प्रकाशित मिति : 20 August, 2020 3:40 pm
एक युट्युब च्यानलसँग डा केसीले भने, ‘राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भनेको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियात्मक स्वरुप हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा किन जलाइयो ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
आदिवासी जनजाति वा सेतामगुराली (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू) का असन्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा सोको प्रतिक्रियाको रुपमा राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको डा । केसीको बुझाइ छ ।
डा केसी भन्छन् :
राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भनेको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियात्मक स्वरुप हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा किन जलाइयो ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतदेखि नै हामीले राष्ट्रको धरोहरमाथि प्रहार गर्दै आयौ । पञ्चायतले यस्तो किसिमको गतिविधि साम्प्रदायिक हुन्छ भन्दै लामो समयसम्म नियन्त्रित राष्ट्रवादको नारामा हामीलाई हिडायो । तर भित्रभित्र सेतामगुराली वा अन्य रुपमा असन्तुष्टिहरु थिए । त्यसपछि २०४७ सालको संविधान आयो ।
४७ सालको संविधानपछि एउटा नयाँ खालको जीवनी, प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक सोच आचरण आएर असन्तुष्ट समूहरुलाई पनि त्यसमा समाहित गरेर लैजानुपर्नेमा नेताहरुले त्यसलाई सत्ताको खेला बनाए । सत्ताको लागि जे पनि गर्ने । नातावाद कृपावाद बेविचार पनि हाबी भयो ।
त्यसको जगमा माओवादी आयो । माओवादीले यी सबै कुरालाई सैद्धान्तिकरण गर्यो । जातीय राज्यको अवधारणा आयो, आत्मनिर्णयको कुरा आयो । त्यसपछि विषय अगाडि बद्दै–बढ्दै २०६२६३ को जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन भएपछि माओवादीले त्यो जगमा उभिएर आफूले उठाएका नाराहरु, कार्यभार र कार्यदिशालाई पनि एउटा वाञ्चित परिणाममा लैजानुपर्नेमा ऊ झन् भ्र’ष्टिकरण र अ’वसरवादी च’रित्रमा आइदियो । छोरी, बुहारी, स्वास्नी बोकेर हिड्न थाले । त्यसपछि जुन यो झण्डा जलाउने तत्व छ, त्यो तत्वका असन्तुष्टि र आवाजहरु सम्बोधित भएनन् जहीको तही रहे ।’